Arcade multiplayer caadi ah oo loo yaqaan 'Golf Galaxy' taasna waxay tagtaa golf | Androidsis
Golf Galaxy waa ciyaar golf cusub kaas oo lagu daro kuwo kale oo badan oo aan haysanay bilihii ugu dambeeyay ee ciyaartan. Waxaan wajaheynaa mowjadaha ciyaaraha golf-ka taas Waxay u dhexeeyaan arcade-ka ugu badan xitaa kuwa isku dayaya inay xoogaa uga sii daran yihiin dhex gasho waxa jilitaanka noqon lahaa.
Midda aan maanta hayno gacmaha dhexdooda waxay ku ciyaaraan qoob ka ciyaar badan iyo khadka tooska ah ee internetka inay la kulmaan ciyaartoy kale, ama hooskaas iyaga u eg; Ma ahan wax noo cad in aan la ciyaareyno waqtiga dhabta ah kuwa kale, in kasta oo ugu yaraan ay leedahay taabashadaas ciyaartoy badan oo ku dayasho mudan oo aan kaligeen ciyaareyn.
1 Halxiraalaha ay tahay inaad soonto
2 La soo bax ciyaartoy kale oo ku jira habka loolanka ee Golf Galaxy
3 Kordhi naadiyadaada golf-ka
Halxiraalaha ay tahay inaad soonto
Golf Galaxy ficil ahaan waa xujo taas oo iyadoo la adeegsanayo tilmaamno iyo jihada si wanaagsan loo hagaajinayo waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku garaacno kubbadda golf-ka ee ay tahay inuu maro dhowr jeer oo lagu garaaco godka. Tan darteed waxaan sidoo kale u isticmaali doonnaa caqabadaha jidka iyo sidoo kale darbiyada ka kooban heer kasta.
Un ciyaar xiiso leh sababta cilmiga fiisigiska iyo sida ay tahay inaan ugu talo galno sidii loogu ridi lahaa godka tirada ugu yar ee istaroog. Markii aan bilaabanay la ciyaarida ciyaartooyda kale, arimuhu waxay isbadalayaan taabashadaas xoogan awgood oo kusii kordhinaysa xaqiiqda ah in midka kale uu naga dheereeyo, inkasta oo aysan qaadan doonin waqti dheer in la ogaado in mararka qaar aan aad u gaabiyo.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee Golf Galaxy waa farsamooyin tiro badan oo aan wajihi doonno si aan u dhammeyno heerka. Waxaan ka hadlaynaa madfacyada laysarka, barxadaha, holograamyada iyo qalab kale oo fara badan waalan oo dhalin doona daqiiqado wanaagsan oo madadaalo ah; Ugudambeyntiina waa waxa ciyaaruhu ku saabsan yihiin, jiidaya arcade iyo kuwa aan caadiga ahayn.
La soo bax ciyaartoy kale oo ku jira habka loolanka ee Golf Galaxy
In Golf Galaxy waxaan leenahay labo qaab ciyaarta. Mid waa caqabadda ka hor imaaneysa ciyaartoy kale, tan kalena waa sahminta oo noo oggolaaneysa inaan galno daraasiin heerar ah oo farsamooyinkan jahannamada ah ay joogi doonaan.
Caqabada ayaa noo horseedaysa horyaal badan si kor loogu qaado heerkeena oo korka ka gaadho sabuuradda. Midda sahaminta ayaa noo oggolaaneysa inaan furno horyaallo cusub ka dibna aan ku ciyaarno midda ugu adag, sidaas darteed labaduba waa la kobciyay oo lala xiriirinayaa inay siiso khibrad ciyaareed weyn Golf Galaxy
Dabcan, si ka hor ciyaarta freemium ee sanduuqyada bililiqada, maskaxda ku hay in aad ka heli doonto iyaga oo furaya jilayaal cusub iyo habeynno; mid kale oo ka mid ah dhinacyada muhiimka ah ee xilligan aan caadiga ahayn oo badanaa waxay aad ugu dhowdahay shilal badan oo soo maray khadadkan.
Kordhi naadiyadaada golf-ka
Ugu dambeyntii xitaa waxaa laga yaabaa inaan helno naadiyo golf fiican sida ugufiican qeybtayada godadka. Waxa naga yaabiyey ayaa ah in luqad ahaan ay Boortaqiis ahaan ugu dhigantahay asal ahaan, waana mid ka mid ah curyaamiinta yar, in kastoo aysan macnaheedu ahayn inaan si fiican u fahmayno wax yar si aan ula qabsano fikradda, maadaama ereyo badan ay aad isugu egyihiin.
Marka la soo koobo, a ciyaar aan caadi aheyn oo naqshadeedu tahay 2D iyo taas oo dhaqdhaqaaqa kubbadda si wanaagsan loogu gaadhay farsamooyinkaas si fiican looga fikiray. Waxa kale oo jira naqshadeynta jilayaasha si loo soo jeediyo luuqadooda muuqaalka ah, in kasta oo badhamada qaarkood lagu khaldami karo inta kale ee ka kooban shaashadda menu.
Golf Galaxy waa ciyaar wanaagsan oo golf caadi ah taas oo aan rajeyneyno inaan ka heli doonno ciyaartoy badan si ciyaaruhu ugu noqdaan waqtiga dhabta ah. Waxaad ku haysataa bilaash.
Ku dhammee heerka ka hor kan kale adoo gelinaya godka ciyaarta si heersare ah u heellan oo leh tanno heerar ah.
Ciyaaraha degdega ah
Wuxuu ku bilaabmayaa Boortaqiis
Developer: Ciyaaraha Orube Game Studio
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Golf Galaxy wuxuu kuu kaxeeyaa ciyaaro ka dhan ah ciyaartoy kale si aad u aragto cidda kubada heleysa marka hore
Iyadoo la adeegsanayo Android 11, barnaamijyadu waxay ku eegi karaan waxna ku duubi karaan labada kamaradood ee moobiilka isku mar